Electronics Industry - Luoyang abuurtay Tungsten-Molybdenum Waxyaabaha Co., Ltd.
Been abuurtay MOLYBDENUM TUNGSTEN
MOLYBDENUM copper daawaha
MOLYBDENUM dusaya MANDREL
Cufnaanta SARE daawaha TUNGSTEN
TUNGSTEN CARBIDE daawaha
TUNGSTEN TIG koronto
Duulista Oo Difaaca
Tungsten culus Alloys
Power Qaybinta Oo Gudbinta
conductivity kaamerada u fiican, Wehliyaha ah ay gacanta ku ballaarinta kaamerada iyo wax aad u fiican ka khayroon daahirnimo. Cad: Alaabada aannu warshadaha korontada leeyihiin guryaha jirka aad u gaarka ah. Waxaa loo adeegsaday sida taarikada salka iyo spreaders kulaylka, waxay hubiyo isku halaynta ee qalabka korontada.
Ugu jaleecada hore, xaqiiqda ah in qaybaha korontada dhalin kulayl ma u muuqdaan lahaa in wax laga walwalo noqon. Maalmahan, ficil ahaan iskuul kasta oo kuu sheegi kara in qaybo ka mid ah computer ka heli diiran iyadoo la demin on. Iyada oo qalab la hawlgala, tiro ka mid ah tamarta korontada bixisey lumo sida kulaylka. Laakiin aynu eegno dhow: iibsiga ee kulaylka ayaa sidoo kale lagu sheegi karaa sida ka daadanayo kulaylka halkii unit (ee) degaanka (cufnaanta ka daadanayo kulaylka). Sida tusaalooyinka ee garaafka muujinaya, cufnaanta ka daadanayo kulaylka ee qaybaha badan oo elektaroonik ah waxay noqon kartaa mid aad u daran. Sarraysaa sida cunaha ah biiyaha gantaal kuwaas oo heerkulka sare sida 2 800 ° C bixi kara.
Wehliyaha ee ballaarinta kaamerada waa arrin kale oo muhiim u ah oo dhan semiconductors. Haddii Semiconductor iyo wax saxan salka ballaariyo oo heshiis heerar kala duwan markii loo feydo isbeddel ah ee heerkulka markaas walaacyada farsamo kac. Kuwani waxay dhaawici karaan Semiconductor ama daciifin xidhiidhka ka dhexeeya chip oo gogoshana kulaylka. Si kastaba ha ahaatee, qalab our, aad u ogaato aad ku jirto gacmaha ammaan ah. qalabka Our leeyihiin Wehliyaha si mug leh ballaarinta kaamerada for soo biiray semiconductors iyo dhoobada.
Sida taarikada saldhig Semiconductor, tusaale ahaan, qalabka our waxaa loo isticmaalaa in marawaxadaha dabaysha, tareenada iyo codsiyada warshadaha. In modules Semiconductor awood for inverters (thyristors) iyo dioska- xoog, waxay ka ciyaaraan door muhiim ah. Waa maxay sababta? Thanks to ay Wehliyaha si mug leh ballaarinta kaamerada iyo conductivity kaamerada fiican, taarikada saldhig Semiconductor ah ee saldhiga xoog leh oo ah Semiconductor ah Silicon xasaasi ah iyo in la xaqiijiyo nolosha adeeg module ah muddo 30-sano ah.
spreaders Heat iyo ulo saldhig laga sameeyey molybdenum, tungsten, MoCu, Booliiska, CU-MoCu iyo CU-MoCu-CU laminates kalsoonaan karo dhereggu kulaylka ahbaa in qaybaha korontada. Tani waxay ka hortagtaa labada kulayl ee qalabka korontada iyo kordhisaa nool wax soo saarka. spreaders Our kulaylka caawin jawi qabow, tusaale ahaan, in modules IGBT, baakadaha RF ama chips LED. Waxaan samaynay wax MoCu farcan aad u gaarka ah ee taarikada side ee chips LED ah. Tani waxay leedahay Wehliyaha ka mid ah ballaarinta kaamerada mid ah in safayr, iyo dhoobada.
Waxaana lagu siinayaa waxyaabaha our for warshadaha korontada la noocyo kala duwan oo blaastiigga. Waxay ilaaliyaan waxyaabaha ka dhanka ah daxalka iyo hagaajin la xidhiidha Alxan dhexeeya Semiconductor iyo waxyaabaha la.
Molybdenum Plate, Molybdenum Rod, Tzm Plate, Molybdenum, Tzm Sheet, Sheet Molybdenum,